ရှမျးတရုတျလူမြိုးတှေ မောငျးနှငျလာတဲ့ကားပျေါကနေ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ နှဈထောငျကြျောဖမျးမိ – Voice of Myanmar
ရှမျးတရုတျလူမြိုးတှေ မောငျးနှငျလာတဲ့ကားပျေါကနေ ဘိနျးဖွူဆပျပွာခှကျ နှဈထောငျကြျောဖမျးမိ
မုံရှာ၊ သွဂုတျ ၆-၂၀၂၀
စဈကိုငျးတိုငျး၊ ပငျလယျဘူးမွို့နယျ၊ ပငျလယျဘူး – ဖောငျပွငျသှားတဲ့ကားလမျး ၊ပေါကျစငျကြေးရှာအုပျစု၊ ဝါးဘိုးခြောငျးကြေးရှာအနောကျဘကျ၊ ရဝေတေောငျထပျနရောမှာ သွဂုတျလ ၅ ရကျ မနကျပိုငျးက မူးယဈဆေးဝါးတှသေယျလာတဲ့ ကားတဈစီးကို ရဲတပျဖှဲ့ကနေ ဖမျးဆီးလိုကျတယျလို့ ပငျလယျဘူးမွို့မရဲစခနျးမှ သိရပါတယျ။
“မူးယဈဆေးဝါး သတငျးအရ ဖမျးဆီးဖို့ တောငျထိပျမှာစောငျ့နခြေိနျ VIGO အဖွူရောငျ အမြိုးအစား ယာဉျအမှတျ MDY 2H / 89 …. ကားကို ရပျတနျ့စဈဆေးတယျ ၊ ကားပျေါမှာ လိုကျပါလာတဲ့သူတှကေ ရှမျး၊တရုတျလူမြိုးတှဖွေဈပွီး ဗမာစကားကို ကောငျးကောငျးမှနျမှနျ မပွောတတျကွဘူး၊ နာရီဝကျခနျ့အကွာမှာ နောကျထပျ ကားတဈစီး ထပျရောကျလာတယျ၊ HILO GL / 48 … အမြိုးအစားဖွဈတယျ ၊ အဲ့ဒီကားကို စဈဆေးတဲ့အခါ အဲ့ဒီကားရဲ့ နောကျဖကျကွမျးပွငျ အံဝှကျထဲက ဖွူဝါရောငျဘိနျးဖွူမှုနျ့ (၁၀)ဂရမျစီပါ ဆပျပွာခှကျ(၂၃၉၈)ခှကျ၊ အလေးခြိနျ (၂၃ ဒသမ ၉၈ ) ကီလိုဂရမျနဲ့ စိတျကွှရူးသှပျဆေးပွား (၉၀၀၀၀)ပွား အလေးခြိနျ (၉) ကီလိုဂရမျ ဖမျးဆီးရရှိတာဖွဈတယျ”လို့ မူးယဈဆေးဝါး ဖမျးဆီးရာမှာ လိုကျပါသှားတဲ့ မူးယဈဆနျ့ကငျြရေး မိုးသောကျကွယျအသငျမှ အဖှဲ့ဝငျတဈဦးကပွောပါတယျ ။
အဲ့ဒီ မူးယဈဆေးဝါးတှကေို မူးယဈတပျဖှဲ့စု အမှတျ(၆) ကသာရဲတပျဖှဲ့၊ ပငျလယျဘူး မွို့မရဲစခနျးမှ ရဲတပျဖှဲ့ဝငျမြား ၊ မူးယဈဆနျ့ကငျြရေး မိုးသောကျကွယျအဖှဲ့ဝငျတှကေ ဖမျးဆီးလိုကျတာဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။
ဖမျးဆီးရရှိမိတဲ့ မူးယဈဆေးဝါး သယျဆောငျလာသူတှကေို စဈဆေးဆောငျရှကျလကျြရှိပွီး ဥပဒအေရ အမှုဖှငျ့အရေးယူသှားမယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
#voiceofmyanmar #VOM #ပငျလယျဘူး
ရှမ်းတရုတ်လူမျိုးတွေ မောင်းနှင်လာတဲ့ကားပေါ်ကနေ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာခွက် နှစ်ထောင်ကျော်ဖမ်းမိ
မုံရွာ၊ သြဂုတ် ၆-၂၀၂၀
စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ ပင်လယ်ဘူးမြို့နယ်၊ ပင်လယ်ဘူး – ဖောင်ပြင်သွားတဲ့ကားလမ်း ၊ပေါက်စင်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ဝါးဘိုးချောင်းကျေးရွာအနောက်ဘက်၊ ရေဝေတောင်ထပ်နေရာမှာ သြဂုတ်လ ၅ ရက် မနက်ပိုင်းက မူးယစ်ဆေးဝါးတွေသယ်လာတဲ့ ကားတစ်စီးကို ရဲတပ်ဖွဲ့ကနေ ဖမ်းဆီးလိုက်တယ်လို့ ပင်လယ်ဘူးမြို့မရဲစခန်းမှ သိရပါတယ်။
“မူးယစ်ဆေးဝါး သတင်းအရ ဖမ်းဆီးဖို့ တောင်ထိပ်မှာစောင့်နေချိန် VIGO အဖြူရောင် အမျိုးအစား ယာဉ်အမှတ် MDY 2H / 89 …. ကားကို ရပ်တန့်စစ်ဆေးတယ် ၊ ကားပေါ်မှာ လိုက်ပါလာတဲ့သူတွေက ရှမ်း၊တရုတ်လူမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ဗမာစကားကို ကောင်းကောင်းမွန်မွန် မပြောတတ်ကြဘူး၊ နာရီဝက်ခန့်အကြာမှာ နောက်ထပ် ကားတစ်စီး ထပ်ရောက်လာတယ်၊ HILO GL / 48 … အမျိုးအစားဖြစ်တယ် ၊ အဲ့ဒီကားကို စစ်ဆေးတဲ့အခါ အဲ့ဒီကားရဲ့ နောက်ဖက်ကြမ်းပြင် အံဝှက်ထဲက ဖြူဝါရောင်ဘိန်းဖြူမှုန့် (၁၀)ဂရမ်စီပါ ဆပ်ပြာခွက်(၂၃၉၈)ခွက်၊ အလေးချိန် (၂၃ ဒသမ ၉၈ ) ကီလိုဂရမ်နဲ့ စိတ်ကြွရူးသွပ်ဆေးပြား (၉၀၀၀၀)ပြား အလေးချိန် (၉) ကီလိုဂရမ် ဖမ်းဆီးရရှိတာဖြစ်တယ်”လို့ မူးယစ်ဆေးဝါး ဖမ်းဆီးရာမှာ လိုက်ပါသွားတဲ့ မူးယစ်ဆန့်ကျင်ရေး မိုးသောက်ကြယ်အသင်မှ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးကပြောပါတယ် ။
အဲ့ဒီ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေကို မူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု အမှတ်(၆) ကသာရဲတပ်ဖွဲ့၊ ပင်လယ်ဘူး မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များ ၊ မူးယစ်ဆန့်ကျင်ရေး မိုးသောက်ကြယ်အဖွဲ့ဝင်တွေက ဖမ်းဆီးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဖမ်းဆီးရရှိမိတဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါး သယ်ဆောင်လာသူတွေကို စစ်ဆေးဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီး ဥပဒေအရ အမှုဖွင့်အရေးယူသွားမယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #ပင်လယ်ဘူး